News | Tag: ICC
विश्वकप क्रिकेट विजेताले कति नगद पुरस्कार पाउँछन् ?
काठमाडौँ । यस संस्करणको विश्वकप क्रिकेट विजेताले अन्य संस्करणको भन्दा बढी पुरस्कार राशी पाउनेछन् । आईसीसीले नगद पुरस्कारको लागि एक करोड अमेरिकी डलर छुट्याएको छ ।
आजबाट विश्वकप क्रिकेट शुरु
काठमाडौँ । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट– २०१९ को आजबाट इंग्ल्याण्ड तथा वेल्समा शुरु हुँदैछ । यस पटकको वल्र्डकपमा मात्र १० टिमले सहभागिता जनाउँदैछन् । यसअघि सन् २०११ तथा २०१५ को संस्करणमा १४ टिमले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा यसपटक भने चार टिम घटाइएको हो । प्रतिस्पर्धामा इंग्ल्याण्ड, साउथ अफ्रिका, इन्डिया, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान तथा वेष्ट इन्डिजले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
यी हुन् विश्वकपको अभ्यास खेलमा शतक प्रहार गर्ने ५ खेलाडी
काठमाडौँ । विश्वकपको अभ्यासस्वरुप खेलिएका खेलहरुमा केही ब्याट्सम्यानहरुले शतक प्रहार गरेर आफू फर्ममा रहेको सन्देश दिएका छन् । तयारीस्वरुप भएका १० वटा खेलको नतिजाले खेलाडीहरुमा आत्मविश्वास पक्कै बढेको छ ।
किन यस संस्करणको क्रिकेट विश्वकप रमाइलो नहुनसक्छ ?
काठमाडौँ । भोलीबाट १२ औं संस्करणको विश्वकप क्रिकेट इंग्ल्याण्ड तथा वेल्समा शुरु हुँदैछ । यस पटकको वल्र्डकपमा मात्र १० टिमले सहभागिता जनाउँदैछन् । यसअघिका दुई संस्करण (२०११ तथा २०१५)मा १४ टिमले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा यसपटक भने चार टिम घटाइएको हो ।
आइसिसी वरियतामा नेपालको स्थान सुधार
काठमाडौँ । आइसिसी वरियतामा नेपालको सुधार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) टी–ट्वान्टी क्रिकेटको वरियतामा नेपालले तीन स्थान सुधार गरेको छ ।
आइसिसी टि–२० वरियतामा पारस, सोमपाल र वसन्त
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले सार्वजनिक गरेको टि–२० नयाँ वरियतामा नेपालका तीन खेलाडी अटाएका छन् । आइसिसीले बिहीबार राति सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा कप्तान पारस खड्का, सोमपाल कामी र वसन्त रेग्मीले स्थान बनाएका छन् ।
आइसिसी बरियतामा सोमपाल र वसन्तको सुधार, पारस दुई स्थान तल
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)ले आइतबार सार्वजनिक गरेको टी–२० क्रिकेटको नयाँ वरियतामा नेपालका कप्तान पारस खड्का दुई स्थान तल झरेका छन् ।
आईसीसीको वरियतामा नेपालका ३ खेलाडी, शरद भने यस पटक अटाएनन्
एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सील (आईसीसी) ले सार्वजनिक गरेको नयाँ टी– २० क्रिकेट बरियतामा नेपालका ३ खेलाडी शिर्ष १०० भित्र अटेका छन् । वरियतामा नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान पारस खड्का, सोमपाल कामी र बसन्त रेग्मी शिर्ष १०० भित्र अटाएका छन् ।